Naag ninkeedii xubinta taranka ka jartay xili uu hurdo kadib markii - iftineducation.com
Naag ninkeedii xubinta taranka ka jartay xili uu hurdo kadib markii
aadan21 / September 19, 2012
iftineducation.com – Dhacdadaan ayaa bil ka hor ka dhacday deeganka Garasbaaleey ee u dhow Ceelasha Biyaha duleedka magaalada Muqdisho, ninka ayaa naagtiisa ku war galiyay in uu mar dhow guursan doona naagta 2aad uu ka dhiibay suuryada, wuxuuna u sheegay in isbuuca soo socdo uu noqon doono guurka, ninka ayaa la sheegay xiliga uu war galinayay naagtiisa in ay aheed xili galab ah.
Naagta ayaa isku dhax buuqday iyada oo u dul qaadan wayday warka ninkeeda uu la yimid, inta aysan naagta wax yeeleen ninka ayaa dadka dariska waxay sheegeen in ninka naagta uu dhex maray murun ku saabsan guurkiisa 2aad.
Naagta ayaa waxaa ka tan badiyay maseer waxayna go’aan satay in xiliga uu hurdo ninkeeda ay ka jarto xubinta taranka, naagtaa ayaa fulisay qorshaheedii ahaa in ninka ay ka jarto xubinta taranka iyadoo adeegsaneesa midi, xubinta taranka ninka ayaa noqotay qeeb dhulka ku soo dhacda iyo qeeb ninka ku dhagan, aadaarka ninka ka baxayay ayaa waxaa ku soo baxay dadka deegaanka, ninka ayaa loola cararay dhanka iyo hospitalka Alhayat oo goobta ka dhawaaa.
Dhaqaatiirta ayaa isku taxluujiyay in ninkaan xubinta taranka dib la iskuugu dhajiyo balse nasiib daro way ku guul dareesteen in ay wax ka qabtaan, ninka ayaa sidaa wuxuu ku waayay xubintii taranka.
Mar la waydiiyay naagta waxa ku kalifay ficilka foosha xun leh ayee ku jawaabtay in uu qaaday maseer aysan ka warheen xiliga ay ku dhaqaaqeesay ficilka, naagta ayaa muujisay dareenkeeda in ay ka xuntahay waxa gaaray ninkeeda.
Ma ahan markii ugu horeesay arimo maseer darteed isku wax yeeleeyaan laba is qabta.
Dadka wadanka Singapore oo aan jecleen galmada